VIDEO: Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo La Kulmay Bulshada Boosaaso. – Idil News
VIDEO: Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo La Kulmay Bulshada Boosaaso.
Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa caawa magaalada Boosaaso kulan kula qaatay bulshada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Madaxweyne Karaash oo la hadlay shacabka ka soo qayb galay kalankaasi ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay iyadoo habeena inuu la kulmo bulshada magaalada, kalana xaajoodo nabadgelyada, horumarka iyo xasiloonida Boosaaso, waxa uu xusay in Boosaaso amni tahay, horumar ka socdo, intaasina ay ku hagaagayso wada-shaqaynta shacabka iyo dowladda.
Sidoo kale Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo ka hadlay muhiimadda cashuurta ayaa xusay in ay qayb muhiima ka tahay cashuur bixintu dhismaha dowladnimada, Isla markaana uu xurmo gaar ah leeyahay cashuur-bixiyuhu, waxa uu ku booriyey shacabka reer Puntland, gaar ahaan kuwa Boosaaso inay bixiyaan cashuurta si dalka loo horumariyo Logan shaqeeyo amnigiisa.
Ugu dambayn, Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa masuuliyiinta iyo shacabka gobolka Bari ku booriyey inay ka wada-shaqeeyaan xasiloonida, nabadgelyada iyo horumarka gobolkooda, si cadawga ku Dhexjira gacan bir ah loogu qabto, taasna ay sahli karto ku xidhnaanta lambarada laamaha amniga ay isticmalaan hadba sida loo dhaqangeliyo.